Wafdiga madaxweyne Farmaajo oo Xaramka uga soo duceeyay shacabka Soomaaliyeed (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wafdiga madaxweyne Farmaajo oo Xaramka uga soo duceeyay shacabka Soomaaliyeed (SAWIRO)
Wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa dalka Boqortooyadda Sucuudi Carabiya ayaa booqday magaalooyinka Makka Al-mukarama iyo Madina, iyagoo halkaasi uga soo duceeyay dadka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa intii uu ku sugnaa dalka Boqortooyadda Sucuudi Carabiya wuxuu halkaasi kulamo kala duwan kula yeeshay boqorka dalkaasi Boqor Salmaan Bin Cabdulcasiis Al Saud oo ay wehliyaan wasiiradda dalkaasi Sucuudiga.
Labadaasi dhinac ayaa ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Sucuudiga, waxayna dowladda Sucuudiga ballan ku qaaday inay gacan gurmad weyn ka geysan doonto abaaraha ka jira Soomaaliya.
Wafdiga uu hogaaminaayo madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inay haatan soo cumreysteen islamarkaana ay usoo duceeyeen Soomaaliya, waxayna umadda Soomaaliyeed Alle uga baryeen inuu ka dul qaado culeyska iyo abaaraha ragaadiyay.
Xilliyada soo socdo ayaa la filayaa in madaxweyne Farmaajo uu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, isagoona kadib guddo gali doonna howlaha shaqo ee horyaala.
Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa in markii uu dib usoo laabto magaalada Muqdisho kadib uu baarlamaanka federaalka Soomaaliya hor-geeyo ra’iisul wasaaraha cusub ee uu dhawaan isaga soo magacaabay, si codka kalsoonida ah ay ugu qaadaan.